Iingcebiso zokufumana uninzi lwePrinta yakho | Iindaba zeGajethi
Iiprinta ziye zaba zizinto ezingenakuphoswa likhaya, iminyaka yedijithali isenze sakwazi ukuziqhelanisa nendawo yedijithali ngokukhawuleza, nangona kunjalo ... Ngubani ongakhange abaleke esuka ekhaya efuna inkampani yokuprinta ukuze afumane amatikiti enqwelomoya? Kungenxa yoko le nto benikwe ixabiso eliphantsi abalibekayo, uninzi lwabantu lukhetha ukuthenga iiprinta zekhaya.
Nangona kunjalo, sinokuhlala sifumana okuninzi kolu hlobo lwemveliso, yiyo loo nto Sifuna ukukubonisa ukuba ngawaphi amaqhinga afanelekileyo okufumana uninzi lomshicileli wakho ekhaya, ukonga ixesha kunye nemali apha endleleni.
Ke hlala nathi kwaye ufumanise ukuba ngawaphi loo maqhinga amancinci anokukwenza ube yinkosi yeeprinta ekhaya.
1 Zithengele umshicileli ohambelana neemfuno zakho
2 Into yokuqala yoqwalaselo
3 Sebenzisa iifonti yamandla asezantsi kunye noseto
4 Ngaba ufuna ukugcina inki?
5 Ukulungelelanisa kunye nokulinganisa umshicileli wakho
Zithengele umshicileli ohambelana neemfuno zakho
Bukhona bonke ubungakanani, i-monochromatic, i-laser ... Ingabonakala ngathi iyinto enkulu ebuthathaka, ke eyona nto iqhelekileyo kukuba siye evenkileni size sigqibe ngento engalinganiyo kuhlahlo-lwabiwo mali, nangona kunjalo, siyityale soloko igcina. Kungenxa yoko le nto kufuneka sithathele ingqalelo ukuba ngaba siza kuprinta amaxwebhu, iifoto okanye ukusetyenziswa okuxubeneyo. Nje ukuba iimfuno zethu zichongiwe, sinokuya kwindawo enokuthenjwa ukufumana umshicileli oya kuthi ahlangabezane nolindelo lwethu. ngaphandle kokusishiya imali eninzi apha endleleni.
Ngokwenene awukho umahluko omkhulu kumgangatho phakathi kwe-laser kunye neeprinta ze-inki, kodwa iiprinta ze-laser zihlala zenzelwe ukumelana nomsebenzi ophakamileyo, ke ukuba unenkampani enkulu kwaye uza kuzinikela ekuprinteni isixa esikhulu samaxwebhu, i-laser umshicileli uya kuba lukhetho lwakho. Ngelixa uza kwenza ukusetyenziswa komshicileli wasekhaya kunye nasekhaya, ukhetho lucacile, Iiprinta ze-inki zihlala zitshiphu kwaye kulula ukuzigcina.
Into yokuqala yoqwalaselo
Ngeli xesha sikulo, kubalulekile ukuba uyikhumbule into yokuba abenzi beeprinta eziphambili sele benazo iisoftware kwinethiwekhi, kodwa ukuba sine-PC eshiyekileyo okanye siphulukene nezinto zoqwalaselo zomshicileli wethu, sicebisa ngobuqhinga obulula . Yiya kwinjini yokukhangela oyithembileyo, kuGoogle ngokomzekelo, kwaye uchwetheze imodeli yomshicileli wakho ukukhangela abaqhubi bamva nje, umzekelo: Abaqhubi be-HP Inkjet L38450 », Ngale ndlela siya ngqo kwiwebhusayithi efanelekileyo yokukhuphela kwaye sifumane isoftware yamva nje.
Ukuba nomshicileli kunye nabaqhubi bayo bahlaziyiwe kubalulekile ukuze ufumane okuninzi kuyo, khumbula ukuba yonke into ekhompyuter ngumdaniso ochanekileyo phakathi kwesoftware kunye nezixhobo. Musa ukuthembela ngokupheleleyo kuseto olungagungqiyo lweenkqubo ezinje nge Windows 10 onokukunika, Kuba iinkqubo zohlobo ngalunye zihlala zisinika ulwazi oluthe kratya kunye neeprofayili zoqwalaselo olungcono eziya kuthi zisivumele ukuba senze uninzi lomshicileli wethu.
Sebenzisa iifonti yamandla asezantsi kunye noseto
Ufuna ukugcina inki? Ewe, kuya kufuneka uyazi ukuba iifonti ezithile zihlala zichitha isixa esibalulekileyo salo mxholo uxabisekileyo kumshicileli wethu. Sincoma ukuba ukhethe Iindaba zeXesha laseRoma y mail njengemithombo ephambili xa ushicilela isicatshulwa sakho. Ukutshintsha ifonti kuhlala kulula kwiinkqubo zeofisi ezinjengeMicrosoft Word okanye iOfisi evulekileyo. Kukwabalulekile ukuba siyazi indlela yokulawula ukusetyenziswa kwamagama abhalwe ngqindilili kunye nezihloko, hayi kuba sidibanisa isixa esikhulu sombhalo ngqindilili okanye ngoonobumba abakhulu siza kufumana iziphumo ezingcono xa sifunda.
Ngendlela efanayo, iinkqubo zokuqhuba zabashicileli bethu ziya kusinika ithuba lokuprinta ngobuninzi obahlukeneyo, ukuba asikho sigqibeleleyo singakhetha ukonga okanye imo esemgangathweni esezantsi efumaneka kwiWindows, kuba sizakuhamba ukuya Iphaneli yokulawula> Iiprinta> Ukhetho lokuprinta y ngaphakathi kweepaneli zokumisela siya kukhetha imo «yoyilo», Oku akupheleli nje ekukhawuleziseni indlela umshicileli asebenza ngayo, igcina i-inki.
Ngaba ufuna ukugcina inki?
Ngamanye amaxesha sicinga ukuba eyona ibiza kakhulu yeyona isebenzayo, kodwa oku akunjalo. Iimpawu ezinkulu zeemarike ezinje nge-HP ziqala ukubonelela ngezicwangciso zokufaka endaweni ye-inki kwixabiso eliphantsi kakhulu. Umzekelo, i-HP Instant Ink yinkonzo efikelelekayo kwaye efikelelekayo ekuvumela ukuba usoloko unayo i-inki. Umshicileli ulumkisa i-HP ukuba amanqanaba e-inki asezantsi kwaye i-HP iwahambisa ngqo emnyango, ngaphambi kokuba aphume. HP kwangoko Ink Zisekwe kumaphepha owaprintayo, hayi i-inki oyisebenzisayo, ke ayinamsebenzi ukuba loluphi na uxwebhu ekufuneka uluprintile, nokuba yeyifoto yombala kumgangatho ophezulu okanye uxwebhu olumnyama nomhlophe, iindleko ziya kufana . Nge- € 2,99 ngenyanga unokuprinta ukuya kuthi ga kumaphepha angama-50, nge- € 4,99 ngenyanga ukuya kuthi ga kumaphepha ali-100 nakwi- € 9,99 ngenyanga ukuya kuthi ga kumaphepha angama-300. Ukongeza, unokutshintsha okanye urhoxise isicwangciso nangaliphi na ixesha.
Ukuba sithathela ingqalelo ukuba ixabiso libandakanya ukuhanjiswa kweekhatriji ezintsha kunye nokuqokelelwa kunye nokurisayiklanywa kwezinto ezindala, kunye nokuguquguquka kwenkonzo, oku kuthathwa njengenye indlela enomdla kakhulu kumakhaya apho kukho abantu abahlala befuna umshicileli womsebenzi, kunye nabo banabantwana abakwiminyaka yokufunda, abantwana abancinci okanye ngokulula kwabo bafuna ukuba noxolo lwengqondo lokuba nee-inki zihlala zikhona xa beprinta. Ngokucacileyo i-HP iqinisekisa olona mgangatho uphakamileyo kunye nokuqina koprinto lwakho nge-Original HP Ink, Enkosi ngenkonzo ye-Instant Ink, bafika ngqo emnyango wakho. Isiqinisekiso esiza kukuvumela ukonwabela amaxwebhu kunye neefoto eziza kuhlala ixesha kunye nexabiso eliphantsi kakhulu kunokuba ucinga. Ngale ndlela siyaqinisekisa ukuba umshicileli wethu akasokoli kwaye sihlala sisebenzisa ii-inki ezikumgangatho ophezulu.
Ukulungelelanisa kunye nokulinganisa umshicileli wakho
Abasebenzisi abaninzi bafumanisa ukuba umgangatho kunye nokusebenza komshicileli kuyawohloka ngokuhamba kwexesha. Ukulinganisa kunye nokulungelelanisa umshicileli kuya kusindisa imali kunye neengxaki, kwimiyalelo yomshicileli wethu siya kufumana ngokubanzi amaxwebhu afanelekileyo okuqhubeka kunye nokuhlukana komshicileli, ngokuqhelekileyo ihlala iyinkqubo ekhawulezayo nelula eyenziwayo kusetyenziswa amaphepha acwangciswe kwangaphambili njengezikhokelo.
Siyathemba ukuba iingcebiso zethu zokufumana okuninzi kwiprinta yakho ziluncedo kuwe, ngoku lithuba lakho lokuba uzisebenzise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Iingcebiso zokufumana okuninzi kwiprinta yakho
Ingcebiso elungileyo kakhulu, intuthuzelo yokuba nomshicileli weWi-Fi ekhaya, kum yimpumelelo iyonke, kuba ndingayisebenzisa nakwesiphi na isixhobo, ikulungele kakhulu.